Ginny na Georgia - Ihe kpatara nnukwu ihe ịga nke ọma na usoro Netflix | Bezzia
Ihe kpatara nke ọma nke usoro 'Ginny na Georgia' na Netflix
Susana godoy | 06/04/2021 14:00 | Akụkọ
Ọ bụ naanị izu ole na ole gara aga na usoro 'Ginny na Georgia'. Ọ bụ ezie na na mbụ ọ maliteghị dị ka otu n'ime nnukwu ọkacha mmasị iji bụrụ ihe ịga nke ọma, ọ nwere. N’oge na - adịghị anya ọ nọrọla n’etiti ndị elere anya n’elu ikpo okwu.
Ya mere, o nwere ọtụtụ ahịhịa iji ghọọ usoro ohuru ohuru gi. Hụla ya? Ọ bụrụ otu a, mgbe ahụ ị ga-ama nke ọma ihe m na-ekwu ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ka nwere ike ịchọpụta ma gbalịa. Uzo nzuzu maka nkata ma jiri otutu nko na nko.
1 Mmekọrịta nne dị obere na ụmụ ya nwere
2 Akụkọ n’azụ nne nwere ihe nzuzo
3 Uto na nsogbu ya
4 Mmekọrịta ịhụnanya na 'Ginny na Georgia'
Mmekọrịta nne dị obere na ụmụ ya nwere
Eziokwu bụ na mmekọrịta nke nne, Georgia, nwere na ụmụ ya bụ ihe na-awụpụta na mbụ ileba anya. Dịka nne ma ọ bụ nna ọ bụla, ọ na-enye ha ihe niile mana ọ bụ eziokwu na ọ na-aga n'ihu n'ihu. Maka na mmekọrịta nke ndị enyi anyị niile chọrọ n’ebe nne anyị ma ọ bụ ụmụ anyị nwanyị nọ, ugbu a ọ dịzi ndụ. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ mkpebi nwa nwanyị na-emetụta ndị okenye karịa, mgbe ọ na-abụkarị ndị ọzọ. Anyị ga-ahụ nnwere onwe ahụ zuru oke n'ihe gbasara ọbụbụenyi na mmekọrịta ezinụlọ, ihe anyị na-achọ ịhụ site na nke mbụ, ọ bụ ezie na ihe a niile ga-agbanwe. Ebe ọ bụ na azụ mmekọrịta a enwere karịa nzuzo na mgbagwoju anya.
Akụkọ n’azụ nne nwere ihe nzuzo
Ihe niile nwere isi njikọta yabụ, na mmekọrịta nne na nwa nwanyị. Nke a pụtara na ọ bụrụ na mmekọrịta dị otu a, ọ ga-abụ maka ihe. Ikekwe n'ihi na nne ahụ nwere nwa ya nwanyị nke obere, na-eme ihe nkiri ụfọdụ nke ezinụlọ na-eme ka ọ dị mma n'ụzọ. N'ihi na, mgbe nwa nwanyị Ginny chọpụtara ihe nne ya na-ezo, ọ naghị agbaghara ya ma ọ bụ otu ọ dị ka ọ dị. Mana ọ bụ eziokwu na a ka nwere ọtụtụ ihe ịmara iji ghọta ya. A ga-ekpughe ihe nzuzo n'ụdị jumps n'oge. Yabụ na n'ụzọ a, anyị nwere ike ịghọta esemokwu ahụ n'onwe ya nke ọma.
Uto na nsogbu ya
Na mgbakwunye na ihe nzuzo na mmekọrịta dị n'etiti nne na nwa nwanyị, usoro Netflix 'Ginny na Georgia' nwekwara ihe nkiri ụmụaka. Mmekọahụ nke mbụ, ịhụnanya nke na-abịa ma na-aga yana uru ọbụbụenyi na nsogbu ụfọdụ. O yiri ka asọmpi na ntozu okè na-adabakwa kpamkpam n'usoro dị ka nke a. Ya mere a priori enwere ike ikwu ya nke ọma banyere usoro ndị ntorobịa, ọ bụ ezie na n'oge a ọ na-ekpuchi karịa ihe anyị nwere ike iche. Enwere okwu banyere myirịta dị na usoro ọzọ nke oge gara aga nwere nnukwu ọganiihu na ọ nweghị onye ọzọ karịa 'Gilmore Girls'.
Mmekọrịta ịhụnanya na 'Ginny na Georgia'
N'ihi na ọbụghị ihe niile ga - abụ ihe nkiri na 'Ginny na Georgia', ọ nwekwara ihe ngosi dị egwu ma nwekwa isiokwu isiokwu. Ihe na-agabiga n’etiti nne na nwa ya nwanyị, nke ọ bụla nwere ọdịnihu edoghi anya. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na oge ụfọdụ anyị nwere ike ịjụ na nwa nwanyị tozuru oke karịa nne. Daba n'ịhụnanya nakwa inwe mmekọahụ nke mbụ bụ ụfọdụ n'ime isi okwu. Isiokwu eji egwuri egwu zuru oke ma na-enyere anyị aka ịghọta agwa ọ bụla ntakịrị. Ya mere, mgbe ị nụchara oge mbụ, ajụjụ onye ọ bụla na-ajụ bụ: Netflix ga-emegharị 'Ginny na Georgia' maka oge nke abụọ? Ekwenyesiri m ike na ihe ịga nke ọma ọ na-enwe, anyị ga-amata ihe dị mma n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Ihe kpatara nke ọma nke usoro 'Ginny na Georgia' na Netflix
Omume ime mgbatị ahụ zuru oke